Expressing Myself: October 2011
कहिले फिर्ने नेपाल ?
आफ्नो परीक्षाको भोलिपल्टै उनलाई अमेरिका उड्नु पर्ने । त्यसैले उनले आफ्नो मम्मी\_ड्याडीलाई राम्ररी ‘गएँ है’ भन्न पनि पाइनन् । ‘युएस् पुगेको रातभरि धुरूधुरू रोएँ, परिवार सम्झेर ।’ फिजिक्समा एमएस्सी सकिनु, डिभी परेर अमेरिका पनि जान पाउनु ! सुमिता ज्ञवालीको लागि देश छाड्नुपर्ने पिडासँगैको रोमांचक समय पनि थियो त्यो । पेन इन प्लेजर, प्लेजर इन पेन भनेजस्तै । यसैगरी ध्रुव पन्थीको समय उनले सोँचेजस्तै हुँदै गयो । र त उनी अहिले प्रतिष्ठित टोकियो विश्वविद्यालयमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ्गमा मास्टर्स गर्दै छन् ।
स्कुले सहपाठी ध्रुव र सुमिता उच्च–अध्ययनको लागि नेपालबाहिर छन् । भाषा र संस्कृतिको बेमेलको कारण उत्तिकै दुख्ख छ । उनीहरुलाई नेपाल छाड्नपुरेको रहरले हैन करले हो । जापानी दुतावासले आह्वान गरेको सरकारी छात्रवृत्तिमा अप्लाई गरेपछि टोकियो विश्वविद्यालयमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग पढ्ने कोटामा अटे ध्रुव । यसैगरी अचानक डिभी परेपछि सुमिताको करिअरले अर्को मोड लिएको हो । ध्रुव जापान पुगे, सुमिता अमेरिका ।
‘एसएलसीपछि मेरो मन नर्सिङ पढ्ने थियो ।’ स्काइपको ग्रुप कन्भरसेसनमा सुमिता यसो भन्छिन् भने ध्रुवको भनाइ यस्तो छ, ‘मेरो त सानैदेखि विज्ञानमै रूचि थियो ।’ घरपरिवारले सुमिताले मन पराएको पेशा रूचाएनन् । त्यसैले उनले खुरूखुरू फिजिक्स पढ्नि, एमएस्सी सकिन् । डिभी परेपछि अमेरिका गइन् । अनि नर्सिङ पढ्ने आफ्नो पुरानो रहर पूरा गर्न अहिले लागिपरेकि छन् ।
ध्रुवले अस्कलमा आइएस्सी गरे, पुल्चोकमा बिइ । पढेका सबै कक्षा टप गरिदिने त उनको पुरानो\_राम्रो बानी थियो । ‘विदेशिने कुराप्रति मलाई कहिल्यै रूचि थिएन’ भन्छन्, ‘तैपनि पुल्चोक टपेर पनि उच्च शिक्षाको लागि विदेश नगएकाले आफन्तिहरुले गुनासो गरे । अरु पढ्ने रूचि त थियो तर यहाँ वातावरण नभएकोमा म खिन्न थिएँ ।’ अनि उनले बिइ सकेपछि नेपालस्थित अमेरिकी कम्पनीमा केही समय काम गरे । पछि स्कलरसिपमा जापान पढ्ने अवसर मिल्यो । ‘बैकल्किप उर्जाको रुपमा हाइड्रोजनको प्रयोगमार्फत् त्यसलाई फ्यूल सेलमा कनभजर्नको माध्यमबाट विद्युतीय शक्तिमा परिवर्तन’ गर्ने ज्ञान हासिल गर्दै छन् ध्रुवले । ‘जुन खनिज इन्धनका लागि शतप्रतिशत आयातमा भरपर्ने नेपालजस्ता देशका लागि त निकै फाइदाजनक छ ।’ उनी भन्छन् ।
उता किन गएको त ? ‘भविष्य सुरक्षित पार्न अमेरिका आएकी हुँ’ भन्दै सुमिता यसरी प्रस्टीछिन्, ‘तपाईँ मरूभूमिमा पानी नपाएर किक्लि–किक्लि हुँदा अचानक दुई घुट्की पानी मिल्दा त्यो पानी घुट्घुट्ती नपिएर ‘मेरो कोइ साथी आउँदै छ, उसलाई पानी राखिदिन्छु’ भन्नुहुन्छ र ?’ कुरा सहि हो ।
‘आखिर म नर्स हुने भएँ ध्रुव इन्जिनियर’ सियाटल बसेकी सुमिताले यसो भन्दा ध्रुव हाँस्दै थिए । ‘तर सुमिता हामी सक्षम भएपछि नेपालै फर्कनुपर्छ बुझ्यौ !’ ध्रुवको यो प्रस्ताव सुमिताले स्विकारिन् पनि । फेरि ध्रुवले आफ्नो कुरा गरे ‘म नेपालै फर्कन्छु, तर सरकारले मेरो ज्ञान र सीपको सही कदर गर्ने ग्यारन्टी भएको अवस्थामा मात्र !’ यो सेप्टेम्बरमा एमइ सकेर लगत्तै पिएचडि गर्ने सुर पनि छ उनको ।
यसैगरी बिइ पढ्दाकी ध्रुवकी क्लासमेट प्रिजा कायस्थ टोकियो विश्वविद्यालयमै सिभिल इन्जिनियरिङ मा पिएचडी गर्दैछिन् । ध्रुवले जस्तै प्रिजा पनि नेपालमा चाहिएजति अनुसन्धानको सुविधा र वातावरण नभएरै उता हिँडिन् ।‘राष्ट्रप्रति बेहद् प्रेम छ तर हामीकहाँ बत्ति छैन, पानी छैन, यातायातको राम्रो व्यवस्था छैन’ प्रिजा भन्छिन्, ‘भारतमा युग अघि हरित क्रान्ति सुरू भैसक्दा अझै पनि हामी परम्परागत खेतीभन्दा माथिको खुड्कीलो चढ्न सकेका छैनौँ ।’ उनको यो गुनासो हैन, यथार्थ हो ।
‘यसो हुनुमा मैले कसैलाई दोष लगाउँदिन’, प्रिजा भन्छिन्, ‘पिएचडि सकेपछि बरू नेपालै फर्कन्छु, मेरो अनुसन्धानले नेपाललाई ठूलो योगदान अवश्य दिन्छ ।’ खुसीको कुरा !
स्वागतम् ! हामी कुर्दै छौँ ‘प्रिजा’, ‘ध्रुव’ अनि ‘सुमिता’हरुलाई !
यी तीन युवाको भन्दा भिन्न कथा छ अर्का युवा सदन राज अधिकारी जो २६ वर्षमा त्रिवि अंग्रेजी केन्द्रीय विभागमा लेक्चरर हुन पाएका थिए । मास्टर्समा गोल्ड मेडलिस्ट भएर विभागमै पढाउन पाउँदा विद्यार्थीबीच उनको हाइहाइ थियो रे । दैनिक १५\_१६घण्टा खटेर उनले राम्रो धन कमाउँदै थिए ।
‘तर जरो गाडेको चिप्लोम्यासी र डिप्लेम्यासीले मलाई निराश बनायो ।’ सदन भन्छन् । सदनको थालमा विश्वविद्यालयले निराशावाद पस्किदियो । अनि सदनलाई यहाँ बस्नै मन लागेन । नेपालमा सदनको वर्तमान सुन्दर थियो तर भविष्य कुरुप । निराश भविष्यको बाँझो खेतलाई उर्वर बनाउन सदनले नेपाल छाडे । एमफिल पनि पुरा नगर्दै र अंग्रेजी विभागलाई राजीनामा कागज पनि नलेखी ‘लात हानेर’ दुई वर्ष अगाडि उनी अस्ट्रेलिया उडे । दिक्षान्त हुनै वर्षौँ लाग्यो त्यसैले आफूले एमएमा पाएको गोल्ड मेडल पनि लिएनन् ।
अहिले उनी भन्छन्, ‘आइ एम ह्याप्पी बिङ हियर, टु डु थर्ड क्लास जब ।’ सदनका चेलाहरुलाई लाग्छ ‘देशले भविष्यको एउटा कुशल प्राध्यापक गुमायो !’
यसैगरी पोखराकी बिना गुरूङ अस्ट्रेलिया गएको सातवर्ष भयो । उनले त्यहाँ काम गर्छिन् । साहुले छोरी जत्तिकै माया गर्छ भन्छिन् । यताको पिडादायी वातावरण भन्दा उनी उतै रमाएकी छन् । उनलाई लाग्छ अहिलेसम्म उनी अस्ट्रेलिया बसेर नेपाललाई कुनै पनि योगदान गर्न सकेकि छैनन्, तर २,३ वर्षमा नेपाल फर्कने योजना चाहिँ बुनेकी छन् बिनाले ।
यसैगरी आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिने सर्तमा एक नेपाली युवा, जो युके छन् भन्छन्, ‘म नेपालबाट युके हिँड्दा पढ्छु, काम गर्दिन भनेको थिएँ । तर घरको रिन तिर्न काम नगरी सुख्खै भएन । अनि पढाइ छाडेर कमाउन लाएँ ।’ यिनी नेपाल नफिर्ने योजनामा छन् रे । घरसँग सम्बन्ध पनि लगभग टुटिसकेछ !
विश्वविद्यालयले सदनको दिल टुटाएको रैछ । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले मन पराउने, ट्यूसन अनि काठमाण्डौँका राम्रा कलेज पढाएर कमाइ पनि राम्रो हुँदा उनले किन सबैथोक ‘लात हानेका’ त ? गत दशैँको छेउछाउमा उनी नेपाल आएर उतै फर्किए । यताका आफ्ना पूर्व सहकर्मीलाई उनले अहिले ‘पढाइ–सडाइ गोलि मारेर टमाटर टिप्दैछु’ भन्छन् । ‘चाकरी, चाप्लुसी अनि त्रिविमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण’ सदन यहाँबाट लखेटिए ।
यसप्रकार, देश छाडेर किन हिँडेको ? भन्ने प्रश्नमा एउटै गुदी भएको जवाफ सबैबाट आयो । ‘देशले मलाई बिगार्यो’ भनेर सत्तोसराप गरेर बटारिनु भन्दा देशमा परिवर्तन ल्याउन आफैँ लाग्नुपर्ने कुरामा चाहिँ सबै युवा सहमत छन् ।
सबैको कथा बेग्लै छ तर उस्तै छ ।
यी युवाहरुप्रति देशको एउटै आग्रह छ, ‘कहिले फिर्ने नेपाल ???’
(Appeared in Yuwamancha Magazine Kattik, 2068 issue)
Posted by CP Aryal (सिपी अर्याल) at 9:19 PM
घर फर्केका यात्री
१३ वर्षका सुरेश नेपाल रोल्पा घोडागाउँको स्कुलमा कक्षा ६ मा पढ्दै थिए । गाउँमा मजदुरी गरी आफ्नो पकेट खर्च अनि घरलाई पनि केही खर्च जुटाउँथे । गाउँमा त्यसरी दुख्ख गरिरहँदा अचानक सुरेशका साथीले उनलाई काठमाण्डौँ जान उचाले । घर छाडी त्यसरी विरानो शहरमा पुग्दा दुख्ख पाइन्छ कि भन्ने सोँच त आएको थियो । तर शहरको रमझम हेर्न र पैसा कमाउने रहरले सुरेश पाँच महिनाअघि साथीहरूकै लहलहैमा लागेर राजधानी शहर आए । भैरहवा बसपार्कमा अलपत्र अवस्थामा भेटिएका सुरेशले काठमाण्डौँ बसाइको आफ्नो तितो अनुभव सुनाए ।
रोल्पा सदरमुकामबाट आठ दस घण्टा हिँडेर मेरो घर पुगिन्छ । घरमा बाआमा, भाई, दिदी, बहिनी छन् । एकदिन म घरमा आनन्दले बसिरहँदा केही साथीहरूले ठूलो आस देखाउँदै भने, “काठमाण्डौँ जाम हिँड् । पैसा कमाइन्छ, रमाइलो गर्न पाइन्छ” । “पढेर सकुन्जेल त पैसा कमाएर घरबार जोडिन्छ, धनी भइन्छ” । ती मध्येका धेरै साथीहरू कुलतमा लागेका थिए । त्यसैले विद्यालाई अवमूल्यन गरी तिनीहरूले भनेको कुरो मलाई कहिल्यै सहि लागेको थिएन । पढाईलाई कुनै पनि कुराले जित्नै नसक्ने रहेछ । विद्या नै सबैभन्दा ठूलो धन हो ।
तिनै साथीको संगतमा लागेर म गत बैशाखमा भागेर काठमाण्डौँ आएँ । ठूला घर, हतारीएका मान्छे, बेपत्ता घुइँकिरहेका मोटर गाडी देख्दा मेरो आँखै तिरमिरायो । काम खोज्न हिँडे । खोज्दै गर्दा होटलमा भाँडा माभ्mने काम गरेँ । त्यहाँ साहुले माया गर्थेन, गाली गथ्र्यो । ग्राहकलाई बासी र नराम्रा खानेकुरा ख्वाउँथ्यो । त्यसमा मेरो चित्त नबुझेर “यसो गर्न हुँदैन साहुजी” भनेको थिएँ । तर मलाई कामबाटै निकालिदियो । होटलमा भाँडा माझ्दा झल्झली घर सम्झन्थेँ । बाआमालाई धेरै सम्झेर रोएँ पनि । पछि त्यो काम छाडेँ । ग्रिल बनाउने ठाउँमा काम पाएँ । वेल्डिङ गर्थेँ । त्यसको उज्यालोले आँखामा असर गर्दो रैछ ।
मलाई साहुजीले माया गर्नुहुन्थ्यो । बस्ने खाने सुविधासहित २५०० रुपैँया तलब दिनुहुन्थ्यो । रोल्पामा मेरो घरछेउको स्कुलमा म कक्षा ६ मा भर्ना भएको थिएँ । काठमाण्डौँ नैकापको अमरज्योती स्कुलमा केही दिन मात्रै पढ्न गएँ । “वर्षमा दुई पटक जाँच दिन जान दिन्छु” भन्नुभएको थियो साहुजिले । म गद्गद् थिएँ । तर मलाई यो शहरले विरानो बनाउँदै लगेको थियो । कमाएर बाकसमा राखेको पैसा साथीहरूले चोरिदिन्थे । म तिनलाई केही भन्न सक्दिनथेँ । हातमा ठेला उठाएर काम गर्थेँ । पैसा तिनले चोरिलग्थे । उता घरमा बाले आस गरेका होलान् भन्ने सम्झन्थेँ । जिन्दगी गज्जबको रैछ, दाई !
यहाँ बस्दा थोरै ठाउँहरू घुमे । जाउलाखेल, रानीबन, स्वयम्भु, रत्नपार्क घुमेँ । सिनेमा हेर्न पनि जान्थेँ कहिलेकाहिँ । ‘छोडिगए पाप लाग्ला’ र ‘वान्टेड’ भन्ने सिनेमा हेरेँ । पत्रपत्रिकामा हिरोहिरोइनको कुरा पढ्न मन लाग्छ ।
काठमाण्डौँबाट थोरै कमाएर, बा, आमा, भाई र दिदीबैनीको धेरै सम्झना बोकेर घर हिँड्दैछु । दशैँको लागि चार हजार रुपैँया खर्चेर बाआमा, दिदी, बहिनीलाई कपडा किनिदिएको छु । घर हिँडेको दिनैबाट म ठगिएको रहेछु । रोल्पा जाने गाडी चढाउनुपर्नेमा ठगले मलाई तौलिहवा जाने बस चढाइदिएछ । तैपनि, लाग्ने भाडा भन्दा दुई सय रुपैँया बढि लिएर । अहिले तपार्इँले भनेपछि थाहा पाएँ । बुटवल झरेर रोल्पाको गाडी चढ्नु पथ्र्यो । तर मलाई कसैले सिकाएन । त्यसैले झण्डै अलपत्र परेको थिएँ । तर म डराउँदिन । बालखै छु तर हन्डर खाएर हिँडेको मान्छे हुँ ।
हात्ति जनावर हो त्यसैले उसलाई पढाई काम लाग्दैन । हामी भनेको मान्छे । जनावरसँग हाम्रो तुलना गर्न मिल्दैन । ज्ञानले मान्छेलाई मात्र गुन लगाउन सक्छ । मलाई कम्तिमा डिप्लोमा गर्ने मन छ । साहुले दस पास गरेपछि बोलाएको छ । तर म अब काठमाण्डौँ जान्न । गाउँमै पढ्छु । कुखुरा पाल्छु । एउटा कुखुरा हुर्काएर बेच्दा हजार÷पन्ध्रसय रुपैँया आउँछ । पढ्न पाइन्छ । बाआमासँग बस्न पाइन्छ । यो पाँच महिनामा मैले दसबाह्र हजार कमाएँ । तर पैसाले मलाई खुसी बनाउन सकेन । मान्छेहरू हानाहान गर्ने रैछन् यो शहरमा । तर हाम्रो गाउँ शान्त छ । सप्पैले आफ्नो काम गर्दै फुर्सद हुँदैन । मिलेर बसेका छन् ।
यहाँ बस्दा उस्तो दुख्ख त पाइनँ । तर फोहरको डुङ्गुर र यहाँका मान्छेले मलाई दिक्दार बनायो । काठमाण्डौँ आएर मात्रै जिन्दगीमा सबैभन्दा ठूलो कुरा पढाइ रैछ भन्ने लाग्यो, पत्रिका पढ्नुपर्ने रैछ भन्ने जानेँ । यसबाहेक जिम्मेवारीबोध भयो । यति सानो उमेरमा घर छाडेकोले पछुतो लागेको छ । यहाँ आएर मात्र पढाइलाई कुनै पनि कुराले जित्नै सक्दैन भन्ने सिकेँ ।
माओवादीले त्यति ठूलो युद्ध गरेर हाम्रा बारिका हरिया मकै भाँचे । “बन्दुक बोक्न हिँड्” भनेर हामीलाई गालामा झापु हाने, मेरो ठूलोबालाई मारे । मसँगै खेल्ने साथी अनि गाउँका थुप्रै जनता मारे । कक्षामा पढाइरहनुभएका सरलाई बाहिर निकालेर हामीले नबुझ्ने भाषण गरे । खै किन हो, तिनले आफ्नो मुठ्ठी हावामा उचाल्थे । उनीहरूसँग नगए त्यै मुठ्ठीले हान्लान् कि भन्ने मैले सोँचेको थिएँ । कोदालो भन्दा साना हामी केटाकेटीलाई बाटो खनाउन लान्थ्यो । बाले सुनाउनुहुन्थ्यो, “नेपाल अब राम्रो हुन्छ रे ।” म बुझ्दिनथेँ हाम्रो बारीको मकै भाँचेर पनि नेपाल कसरी राम्रो हुँदो हो ! मेरा बाको दिन उस्तै छ । दुई छाक खान उस्तै दुख्ख गर्नुहुन्छ । तरपनि, हाम्रो देशलाई सप्पैले राम्रो मान्ने दिन आउला नि ढिलोचाँडो ।
(Appeared in Nagarik daily, 15 October 2011).
Posted by CP Aryal (सिपी अर्याल) at 9:04 AM